साताको अन्तिम कारोबार दिन: कुन कम्पनीका लगानीकर्ताले कति कमाए ? - Arthatantra.com
साताको अन्तिम कारोबार दिन: कुन कम्पनीका लगानीकर्ताले कति कमाए ?
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन विभिन्न ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा उछाल आएको छ । उक्त दिन उच्च दरमा सेयर मूल्य वृद्धि हुने अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् ।
उक्त दिन सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आज कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४९ रुपैयाँ ७० पैसाले वृद्धि भई ५४७ रुपैइाँ १० पैसा कायम भएको छ ।
यता, रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको पनि ९.२२ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता ५९ रुपैयाँ ९० पैसाले वृद्धि भई ७०९ रुपैयाँ ९० पैसा कायम भएको छ ।
उक्त दिन ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर कम्पनीको पनि सेयर मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । आज कम्पनीको मूल्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिकित्ता ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको कम्पनीको सेयर मूल्य ५४० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
उक्त दिन यी कम्पनीहरु सहित माउनटेन हाइड्रो नेपाल, युनियन हाइड्रोपावर,अपि पावर, अनआईबिएल समृद्धि फण्ड–१, साधाना लघुवित्त वित्तीय संस्था, शिवश्री हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर लगायतका लगानीकर्ताहरुले कमाएका छन् ।
वि.सं.२०७८ भदौ २४ बिहीवार १५:२५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे यी हुन् आज सेयर मूल्यमा उछाल आएका कम्पनीहरु, प्रतिकित्ता कुनको कति बढ्यो ?
पछिल्लाे आज ४ कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति बिक्री भयो सेयर ?
किन्ने होइन त नागरिक लगानी कोषको ३ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर ?
वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १३:४५
काठमाडौं । सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्टको संस्थापक सेयर बुधवार (असोज ६...